Alpha Eye သည်မိုက်ခရိုကင်မရာများတွင်ပုံရိပ်ပုံပျက်ခြင်းကိုဖြေရှင်းပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » alpha မျက်လုံးအသေးစားကင်မရာထဲမှာ optical image ကိုပုံပျက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
ပုံမှန်အာလဖ Image ကိုနာမတျောကိုထမျးကုမ္ပဏီသစ်ဈေးကွက်ဝင်သော
IBC 2019, 13-17 စက်တင်ဘာလ 6.C28 ရပ်: တစ်ဦးလေးစားနာမည်သစ်ကုမ္ပဏီ, အာလဖပုံရိပ်, IBC2019 မှာ၎င်း၏ပထမဆုံးအများပိုင်အသွင်အပြင်ဖြစ်စေမည်။ သေးသေးလေးကင်မရာများအတွက် optical ပုံပျက်: အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ဘုံပြဿနာဟာရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ goalmouth အတွက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးငုတ်အတွက်တပ်ဆင်ထား - - အားကစားအတွက်ဘုံနှင့်အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်သေးသေးလေးကင်မရာများဒီနေ့ရဲ့ဘဏ်ဍာအတွက်အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ (ပင်လျှို့ဝှက်) အတားအဆီးများမှာသေးတစ်မူထူးခြားတဲ့အမွငျကိုပေး။ အခြား application တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရိုက်ကူးရေးနှင့်ဆေးဝါးပုံရိပ်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုထိုကဲ့သို့သောကင်မရာများပြင်းထန်စည်ပုံပျက်မှုအရာအမြင်ငါး-မျက်စိမှန်ဘီလူး၏ကျယ်ပြန့်လယ်ကွင်းသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ကြောင်း - တစ်ဦးဘောလုံးရည်မှန်းချက်များ၏င်အောင်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးထွက်ဦးညွှတ်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ alpha မျက်လုံးဟာပုံပျက်တက် straightens တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစမှန်ကန်သော zoom ကို, လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြို tilt အပါအဝင်အကောင်းဆုံးကင်မရာ positioning ကိုထက်လျော့နည်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြားကိစ္စရပ်များများအတွက်နိုင်ပါတယ်။
တညျ့ခံရဖို့တစ်ခုချင်းစီသေးသေးလေးကင်မရာတစ်ခုအာလဖမျက်လုံးယူနစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်မှု၏ကြာချိန်များအတွက်ပိုင်ရှင်မဲ့ run ဖို့ထွက်ခွာသွားပြီးတော့တစ်ဦးနဲ့ Mac သို့မဟုတ် PC App ကိုသုံးပြီးထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းယူနစ်ဖို့ feed ကို SDI, ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါသည် HDMI ဒါကြောင့် device ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအဆင်ပြေတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်: ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကြောင့် 155mm x ကို 120mm x ကို 30mm တိုင်းတာခြင်းတစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။
"အားကစားပရိသတ်တွေတစ်ငုတ် cam သို့မဟုတ် goalmouth cam ဆောင်တတ်၏သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏မျက်နှာကို ထောက်. ပြင်းထန် optical ပုံပျက်အတူတက်ထားရတယ်" ဟု Alpha Image ကို CEO ဖြစ်သူ MC Patel ကပြောခဲ့သည်။ "ဒီအာလဖမျက်လုံးပြည့်စုံပြဿနာကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဒါဟာမှုမရှိခြင်းကိုအောင်းနေချိန်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်ထဲမှာလည်ပတ်နေတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ corrector သောကွောငျ့ဒါပြဿနာမရှိဘဲဘဏ်ဍာသို့ကိုက်ညီ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့, တတ်နိုင်, အစုံသည်နှင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုမေ့လျော့။ "
alpha Image ကိုနောက်ပိုင်းတွင် 1987 ကနေဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယို၏အရုဏ်မှာဆန်းသစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအဘယ်သူ၏အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှု Post-ထုတ်လုပ်မှုအသွင်ပြောင်းထားတဲ့မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်ထုတ်ကုန် created MC Patel ကများနှင့်တိ Gale ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မူရင်းကုမ္ပဏီဝယ်ယူခဲ့သည်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်နောက်ဆုံးမှာပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့် Gale နှင့် Patel ကသည်အခြားစျေးသည်အဘို့အ R & D ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့မူလက, 2005 အတွက်အသစ်တခုအာလဖ Image ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
alpha မျက်လုံးနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. alpha Image ကိုသယ်ဆောင်ရန်ပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်: + 44 (0) 7748 636 171
alpha မျက်လုံး Apha ပုံရိပ် စည်ပုံပျက် ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana အမှငျြ ငါး-မျက်စိမှန်ဘီလူး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HDMI IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး micro ကင်မရာများကို အလင်းပုံရိပ် Distortion ပြိုစောင်း လည်ပတ် SDI လှံ & Arrows စာတန်းထိုး တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် zoom 2019-08-22
ယခင်: Insys ဗီဒီယို Technologies က IBC2019 မှာနယူးတိမ်တိုက်မီဒီယာကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြေရှင်းချက်နဲ့ Expanded OTT ပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်ဖို့
နောက်တစ်ခု: နယူး DPA 2028 ဆိုသံ Mic တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်အခင်းအကျင်းကိုပြောင်းလဲရည်ရွယ်